Khabiirka Kala Duwan: Sidee Howlka Emailka ula Joogaa SEO
Raadinta Mashiinka Gawaarida waxay u taagan tahay laba tiir oo waaweyn, oo kor u kacawaxqabadka bogagga iyo booqashooyinka goobta. Hawl-galka goobta wuxuu ku shaqeeyaa qaab-dhismeedka, waxqabadka, waxyaallaha, iyo bartilmaameedyada muhiimka ah, kuwaas oo ahku xiran ganacsiga iyo daawadayaashiisa. Nidaamka dib-u-habeynta waxaa loola jeedaa daabacaadaha dibadda iyo xiriirada soo socda ee keena daawadayaashabogga. Suuq geynta Emailka wuxuu saameyn ku yeeshaa SEO iyada oo loo marayo labadaba qaybahaas.
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital waxay sharraxayaan sida ololaha suuq-geynta suuq-gareenta ay saameyn ugu yeeshaan waxqabadkaaga SEO-ga si toos ah.
Goolasha Asaasiga ah
Ololaha suuqgeynta suuqgeynta waxay si toos ah u saameynayaan raadintadarajaynta maaddada sababaha soo socda awgood:
Xiriirrada soo socda Miisaanka maamulka domain wuxuu xayeysiinayaa waxqabadka ku saabsan raadintainjirta adoo go'aaminaya tirooyinka xiriirka ee dadka si toos ah ugu diraya goobta, kala duwanaanshaha iyo awooda sare ee ilaha martida. XoogXiriirrada soo galaya waxay kaa caawin doonaan inaad gaarto meel tartan ah. Suuq-geynta Emailka wuxuu saameyn ku yeeshay xubnaha iyagoo abuuraya isku-xir u dhaxeeyaposts on site, taas oo xaqiijinaysa helitaanka iyaga ayaa sii ahaan doona mustaqbalka.
Horumarinta Maareynta Suuq-geynta Emailka waxay kordhisaa aragtida guudcontent. Tusaale ahaan, in lagu daro boodhka todobaadlaha ah ama billaha ah waxay muujineysaa meelaha ugu caansan, waxay kordhiyaan taraafikada
Ka-qaybgalka goobta-dhexdeeda Google ayaa go'aaminaya qiimaha qiimaha goobtaqiimeynta kharashka gaadiidka iyo heerka isticmaalka dadka. Haddii aad haysato ballan ka mid ah dadka isticmaala firfircoon, ka dibna raadi darajooyinka bogga ayaa noqon doonaka sarreeya haddii aadan haysan dhagaystayaal dhagaystayaal ah
Kuwani waa qodobo labaad oo hagaajinaya darajada raadinta boggeeda internetka iyada oo loo marayo suuq-geynta emailka:
Ka qayb qaadashada Warbaahinta Bulshada Waxqabadyada warbaahinta bulshada ma laha waxSaameynta SEO. Si kastaba ha ahaatee, qaybinta content iyo abuurista posts on warbaahinta bulshada micnaheedu waa in calaamad u gaar ah daawadayaasha ballaaran. Natiijadu waaaragti korodhsi ah oo abuuraya fursado xitaa ka badan oo lagu soo jiidan karo xidhiidhada bogga
Taageerada Dhismaha Suuq-geynta Emailka wuxuu ka caawiyaa dhisida nooc ganacsi,sidaas awgeed soo jiidato macaamiisha cusub oo ay ku hayaan kuwa hadda jira. Tirada ugu badan ee sumcadu waa, waa ka sarreeyaa fursada ah in lagu muujiyo heer saredaabacaadda, taas oo horseedaysa in la jaangooyo dadka saamaynta leh.
tixgelin mudo dheer ah Isticmaalka tirakoobka ayaa lagu soo ururiyay emailkaololaha suuq-geynta ayaa ka caawiya sameynta istaraatiijiyado joogta ah horumarinta muddada dheer Isticmaalka macluumaadkaan, waxaa suurtogal ah in la aqoonsadomaxay yihiin dhagaystayaasha aad jeceshahay iyo kuwa ugu caansan.
Iska ilaali inaad iibiso ficil gaar ah dadweynaha. Bedelkeeda, xoogga saarsoo saarista mawduuca asalka ah iyo qiimaha qiimaha leh, walxaha, iyo fursadaha.
Mid waa inuu u ogolaadaa macaamiishiisa inuu ku biiro liiska emailka, oo ay keento dulsaar.
U dirista emeelyo badan waxay ku qasbi karaan macaamiishooda in ay abaabulaan. Mawduuc baaxadiisu waadhibka, iyo dadku waxay u egyihiin sida spam. Xaddid mowduucyada dhawr dhibcood oo muhiim ah.
Waxqabadka waa in lagu cabbiraa. Mareegaha boosteejada boostadafurfuran iyo fara-galin, waxay siinaysaa aragti ku saabsan sida dhagaystayaasha u dhaqmaan ama ula falgalaan waxyaabaha la soo jeediyay.
Google ma dhexmarayo emails. Si kastaba ha ahaatee, suuq-geynta emailka ma ahan wax faa'iido lehee SEO sida ugu dhakhsaha badan waxay saameyn kartaa dabeecada ee dadka raacsan, kuwaas oo laga yaabo in ay kor u kicin ama hoos u dhigo aad search. Macaamiisha Semt waxay caddeeyeen wax ku oolnimada isu-geynta suuq-geynta emailka ee istaraatiijiyada SEO ee shirkadda Source .